Wararka - sida loo rakibo gogosha bamboo
Gogosha bamboo culus ayaa sidoo kale loo yaqaan gogosha xarkaha bamboo. Waxaa laga sameeyaa fiiloyin tayo sare leh oo bamboo ah waxaana lagu cadaadiyaa dhowr kun oo tan oo tiknoolajiyad cadaadis sare leh. Xulashada noocan ah sagxadda bamboo waa ka nadiifsan tahay tan sagxadda bamboo caadiga ah. Waa nooc cusub oo ka mid ah boodhadhka dadka sameeya, ee u qaata bamboo ahaan maadada ceyriinka ah waxaana lagu farsameeyaa iyadoo la raacayo mabaadii'da wax soo saarka ee alwaaxda la isku daray Waxaa jira afar muuqaal oo dusha sare ah oo REBO bamboo ah:
1. MF021 / DF021: Naqshadeynta dusha sare
2. MF121 / DF121: Naqshad yar oo wareega dusha sare loo jeexjeexay
3. MF321 / DF321: nashqad weyn oo naqshadeynta dusha sare ah
4. MF621 / DF621: Naqshadeynta dusha sare ee jeexdin
Macaamiisha ayaa dooran kara qaababka ay jecel yihiin.
Si aad si fiican ugu rakibtid gogosha bamboo ee banaanka, waxaa jira waxyaabo loo baahan yahay:
1. Joist:saldhig ahaan ka hor inta aan la rakibin decking. Qoryo, bir, walxo bamboo, dhammaantood waa ok, wax kasta oo aad u baahan tahay.
2. Clips iyo Boolal:alaabta birta ah. Ku xirxirida clips-ka, REBO waxay soo jeedineysaa clips-ka DC05 (sawirka ugu horeeya), wey ku xoog badan tahay xajinta, farqiga udhaxeeya labada guddi waa qiyaastii 6-7mm. Qeybaha yar yar ee loo yaqaan 'siding clips', waxaad u isticmaali kartaa DC06-keena (sawirka labaad) si wanaagsan oo loo ilaaliyo rakibidda.
3. Sawir koronto
5. Heerka Ruuxa
6. Dubbe dubbe
7. Darawalka Korontada Korontada
1. Kahor rakibida, fadlan alaabada ku hay meel qalalan oo har leh, iska ilaali qoraxda iyo roobka.
2. Kahor rakibida, nadiifi goobta shaqada, hubi in aasaasiga uu siman yahay oo xasilloon yahay, dheecaanku waa mid siman oo waafaqsan shuruudaha naqshada dhismaha.
3. Jeexjeexayaasha waa in lagu dhejiyaa sibidhyo adag oo adag ama sibidhka sibidhka. Xaqiiji in geedka looxadkiisu yahay 1-2 digrii heerka ka hooseeya si aad biyo u daadiso.
4. Masaafada u dhexeysa joornaalada waa inay u dhexeeyaan 450 ilaa 500mm. By sagxad dherer ah 1860mm u baahan min.5 joists.
5. Fogaanta dabaqa ilaa sagxadda hoose waa inay ahaataa 80-150mm.
Waa kuwan Guilds-ka rakibidda tixraaca:
1. Rakibaadda salka: laba dariiqo oo tixraac ah
1) Ugu Yar: Shamiito-shamiito oo ka hooseeya joornaalada
2) Xirfadle: U adeegso dhejiska laba-lakab dusha sibidhka sibidhka muddada-dheer
2. Madaxa ayaa isku laabay: REBO bamboo decking waxaa loogu talagalay carrab iyo madax jeexdin, marka labada loox si fudud ayaa laysugu dhajin karaa.
3. Habka Rakibidda Siding: Waxaad u isticmaali kartaa DC 06 bilowga iyo dhammaadka. looxyada waa la wadajirin karaa si fudud.
4. Ku xirashada jeexjeexyada isku dhejiska ah ee labada dhinac dherer ayaa lagu wada hagaajin karaa iyadoo la raacayo clip DC05 ilaa joists-ka. Masaafada u dhexeysa guddiga waxay ku saabsan tahay 6-7mm rakibida ka dib.
Halkan macaamiisha qaar ayaa ku wareeri doona farqiga u dhexeeya labada loox. Waa maxay sababta ay u dhexayn lahayd farqi yar? Sida la ogsoon yahay, qurxinta bannaanka, waxaa jiri doona ballaadhin iyo hoos u dhac ku yimaada qorraxda iyo roobka, sidaas darteed waa lagama maarmaan in loo daayo farqi yar oo looxyada ah si ay ugu habboonaan cimilada kala duwan.
Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir ~